Jera uNkulunkulu uzwile, walalela ngempumelelo ngesikhathi PT / Expo ECHINA 2017 e Beijing, China.
Jera hasngempumelelo ttended at PT / Expo ECHINA 2017 eyenzeke 27-30 th ka-September 2017 e Beijing, China.
Siyabonga ngokuvakashela idokodo lethu
Jera hasngempumelelo ttended at PT / Expo ECHINA 2017 eyenzeke 27-30 th ka-September 2017 e Beijing, China. Siyabonga ngokuvakashela idokodo lethu
Indawo Sekukhangisa: I-National emhlanganweni Centre e-Beijing. Booth: Hall E5, idokodo 5618. Website Sikhungo.
Isihloko sombukiso yayetayelekile imikhiqizo yethu tibuye thina wawutshela
FTTH Fibre ikhebula optic izesekeli, for ukwakhiwa inethiwekhi ezokuxhumana kanye internet.
Fibre optic Splice ukuvalwa (FOSC)
Fibre optic ekunqanyulweni amabhokisi (FODB)
FTTH iconsi wire izibopho kanye nokufakwa
Preformed imikhiqizo umugqa kanye izesekeli,
Engagqwali band ngoba izigxobo nezinye izinsimbi.
Sakujabulela amakhasimende amasha esuka: China, South Asia, eNingizimu Melika naseYurophu. Sibonga kakhulu ngokuza kwethu. Ithemba singakwazi eyakhelwe sekukudala ngokunikeza izinga unethemba ozakwethu.
Uma uyobe unemibuzo - ungangabazi ukuxhumana nathi.